Atao izay tsy hisian’ny korontana fotsiny… | NewsMada
Atao izay tsy hisian’ny korontana fotsiny…
Par Taratra sur 06/02/2017
Efa miantsoroka andraikitra ny mpitondra amin’izao fahasahiranam-bahoaka manao tsy omby aloha izao? Ny efa tsy afaka; ny tonga, tonga ihany. Ny vokany no aoka hitsara izay ny amin’ny tsy fandriampahalemana, delestazy, fidangan’ny vidim-piainana, fitsaram-bahoaka, tsy fanjarian-tsakafo, haintany…
Efa tsy mihetsika sy tsy miteny ny vahoaka: miaritra fotsiny. Miteny, tsy henoina; raha mihetsika, darohana amin’ny herim-pamoretana. Efa tsy takona afenina tsy mila porofoina intsony ny raharaha fa mihasarotra andro aman’alina, vao ikoropahana. Mby amin’izay tsy azo zakaina intsony tsinona, ka hipoaka ho azy.
Zava-doza! Tsy ny mety hipoahan’ny korontana sosialy ihany, fa ny afitsoky ny mpitondra amin’ny fanahiana sy fiatrehana izany. Tsy ny vahaolana amin’ny fanamaivanana ny fahasahiranam-bahoaka no manetsika sy imasoana, fa izay tsy hisian’ny korontana fotsiny: fahamarinan-toeran’ny fitondrana.
Mitohy hatrany ary vao mainka mihamahery vaika, ohatra, ny delestazy: miverimberina, maharitra. Misy ihany ny taxi-be mampiakatra saran-dalana ho 500 Ar zakain’ny vahoaka, fa hoe tsy mahazo fanampiana izay manao izany. Hiakatra ihany ny vidin-tsolika manatratra ny hoe vidiny tena izy, na ho ela na ho haingana.
Amin’izany rehetra izany, eo hatrany ny fahasahiranam-bahoaka lalina sy maharitra. Tsy miakatra tsinona ny fahefa-mividy, tsy misy firy ny asa vaovao miforona, ratsy ny vokatra noho ny fivadibadihan’ny toetr’andro… Vono afo sy ala saritaka tsy hisian’ny korontana sosialy fotsiny no afitsoky ny mpitondra.
Tsy izay fahasahiranana no mampikoropaka azy amin’izao, fa ny fahamarinan-toerana sy fitoniana politika. Tsy ny fitondrana amin’izao aza ve no nampitombo ny fahasahiranam-bahoaka noho ny tsy fahombiazana? Aleo, hono, hilamina ny fiarahamonina sy ny vahoaka, na ao anatin’ny fahasahiranana lalina sy maharitra aza.
Tsy misy resaka izay fampandrosoana, fa izay tsy hisian’ny korontana fotsiny… Tsy maintsy hipoaka ihany na ho ela na ho haingana, raha mbola tsy tafarina ny fiainam-bahoaka? Mila fanovana…